Ithegi: elula | Martech Zone
Kudala ndifuna ukulandela eyam i-Open = Growth post okwethutyana. Ukuchazwa kweso sithuba kukufumaneka kwempumelelo xa abantu begxila kwindlela ezinokuthi zidityaniswe ngayo nezisombululo zazo. Kukho icala elisecaleni kule nto, kwaye ezo zezenkampani zokunciphisa umda ekusebenzeni kwezisombululo zabo kwisiseko sendlela ezisetyenziswa ngayo. Ukongeza uninzi lweemveliso, iinkonzo kunye neempawu kunokuba yingozi. Abadwelisi benkqubo bayayibiza